Zim soldier gunned down in Jo’burg – NewsDay Zimbabwe
Zim soldier gunned down in Jo’burg
Previous article Lessons and progress after the debut HPV awareness day
Next article Zanu-PF: The proverbial suitor?
Shame, zvinorwadza chose.
Nematambudziko kune vedzinza rake nerekwamai, hama, shamwari neavo vose vaayishanda navo. Jehovah, nyaradzayi mhuri iyi, uye rangayi mhondi
iyi murimi Samasimba.
We should hunt down and kill south Africans in Zimbabwe too just like the way they kill us like chickens
some of these killers are our own children. they easily spot another zim child out there and they prey on them
if this continues we will start hunting down all South Africans in zimbabwe and gun them down one by one but we are not that kind of a nation but if push comes to shove we will be forced,i am sorry to this.
If this continues we will also start hunting South Africans in Zimbabwe and kill them one by we are notthat kind of a nation,but if push comes to shove,there will be no option.